टिभी संसारमा पैसा कमाउने तरिका - मेरो मुद्रा बनाउने ब्लग
जुन 11, 2018 जुलाई 23, 2018 व्यवस्थापक0टिप्पणीहरू TV संग कमाउन, टिभी तिर्ने, tV, टिभी कार्यक्रम
टिभी संसार अर्ब-डलर साना व्यापार छ. जन डे Mol कि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँले तैयार र टिभीमा स्वरूप marketed र, को लागि धन्यवाद, आफ्नो भाग्य भेला. हामी जो तपाईं एक अभिनेता रूपमा पैसा बनाउन सक्छ यस लेखमा राज्य यदि यो स्पष्ट हुनेछ, निर्देशक वा कैमरामैन. यसबाहेक, यस व्यापार मा पैसा कमाउन अन्य तरिकाहरू छन्.
कुनै दर्शक संग एक टीवी श्रृंखला साँच्चै आकर्षक छैन. सार्वजनिक पाउन सक्षम हुन, विभिन्न कदम यो लागि बनेको हो. भत्ता भुक्तान गर्न सकिन्छ, जो तपाईं एक श्रृंखला हेर्न र फिर्ता रकम प्राप्त गर्न सक्षम छन् भन्ने हो!
सामन्यतया, यो धेरै नगद वास्तवमा फिर्ती छ बस कसरी शो मा एक सानो छ. एक टक शो अन्तर्गत मनपर्ने पैदावार शो
एक टिभी कार्यक्रम सोच्न
तपाईं संभावना थाहा यसलाई कि: तपाईं टिभि कार्यक्रम को लागि एक अद्भुत विचार प्राप्त, तर त्यसपछि? परम उद्देश्य यसको लागि बाहिर आउन छ, आफ्नो विचार बनाउन बुझे. र सबै भन्दा तत्काल लागि अवरोधलाई त्यहाँ. यो क्षण देखि, यसलाई अरू कोही विचार संग टाढा सार्दा छ संभावना छ. यो सक्षम वा केहि न्यायसंगत रक्षा रूपमा छ?
एक टिभी ढाँचा प्राय एक धारणा संग सुरु. यो केहि हुन सक्छ, तर यो धारणा कुनै पनि सुरक्षा पाउन पर्याप्त छ. यो लागि विचार थप afield हुन छ. थप जानकारीको, राम्रो.
अन्त मा, कि लिखित-बाहिर ढाँचा टिभि कार्यक्रम को लागि फ्रेम प्रदान.
प्रारूप प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण हुन सक्छ. तर, त्यहाँ यो ढाँचा लागि धेरै परिमार्जनहरू ताजा ढाँचा प्रदान गर्न सक्छ कि एक संभावना छ. प्रतिलिपि अधिकार यो ढाँचा को सुरक्षाको लागि पर्याप्त समर्थन छ भने प्रश्न हो.
तैपनि यो उत्पादन भर्ना गर्न एक राम्रो विचार छ, त्यसैले त्यहाँ कम्तिमा प्रमाण हो, जो तपाईंलाई उत्पादन उत्पत्ति यदि देखाउन सक्षम छन्.
संरचना यसलाई हेर्छ जो एक निर्माता गर्न शुरू हुन सक्छ. तिनीहरूले नयाँ प्रत्येक दिन विचार संग bombarded गरिने, तर तपाईं कहिल्यै थाहा हुनेछ.
एक कार्यक्रम मा सहभागी
तपाईं एक भक्त हुन्, वा तपाईंले केही टिप्पणीहरू गाउन सक्नुहुन्छ? टेलिभिजनमा, यो तपाईं एक खेलाडी रूपमा नियुक्त गर्नु गर्न सक्षम छन् जो अनुप्रयोगहरू भरिएको गर्नुपर्छ. यो अक्सर विशिष्ट अनुप्रयोगहरू लागि प्रदान गर्न धेरै इनामदायी छ. एक पटक छनौट मार्फत, अनुभव सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. सजिलो र थप सरल लगभग असम्भव छ!
यो साँचो हुन पनि राम्रो देखिन्छ, तर यो वास्तवमा छ. यसलाई मिलान परीक्षकको र प्रशिक्षक को सुची मा राखिएको हुन सक्छ. कल कहिले काँही केही श्रृंखला र चलचित्रहरू हेर्न छन्. उदाहरणका बाटो द्वारा, Netflix कहिले काँही बाहिर फिलिम र TV को लागि आवेग गर्नेहरूलाई लागि deductions राख्नु भएको छ. Netflix को घटना मा, तपाईं कामदारको रूपमा चलचित्र र शो लेबल आवश्यक. शब्दहरू प्रयोग, श्रृंखला वा चलचित्र एक श्रेणी जोडिएको थियो.
धेरै टिभी आवेदन, यस्तो धारावाहिक रूपमा, अक्सर अतिरिक्तका लागि शिकार. सामान्यतया तपाईं यसलाई एउटा निपुण अभिनेता बन्न आवश्यक छैन. लगभग सबै कार्यहरु लागि, तपाईं पनि बोल्न आवश्यक छैन. त्यहाँ साइटहरु धेरै तपाईं एक अतिरिक्त रूपमा दर्ता गर्न सकेन जहाँ. अलग धारावाहिक मा figurating देखि, बाहेक, तपाईं एक अतिरिक्त रूपमा दर्ता गर्न सकेन जहाँ धेरै चलचित्र छन्. को reimbursements धेरै सय यूरो यात्रा समायोजन फरक.
हामी नगद पकड लिन्छ अप छ भनी घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, यो अर्ब डलर बजार मा. माथि उल्लिखित विधि कुनै योग्यता संग मान्छे को लागि सबै भन्दा राम्रो हो र अतिरिक्त आय रूपमा उपयुक्त. अरु के छ त, यो साँचो काम तिर एक कदम हुन सक्छ. तपाईं यस उत्पन्न गर्न पहिलो हुन छैन जाँदैछन्. उत्कृष्ट भाग्य!प्राप्त फ्री मुद्रा प्रयोग PayPal मुद्रा योजक अनलाइन
← मुद्रा बनाउन कसरी Snapchat संग आजकल?